Orinasa sy mpanamboatra horonantsary translucent China | Lima
Mitondrà teny manaitaitra fanahy, andian-teny tsy fantatra ary hafatra mampihetsi-po any an-tranonao, any amin'ny toeram-piasana, na amin'ny birao! Namboarina tamin'ny hazo avo lenta sy misy zorony boribory misy sisiny fasika ho fijery mijaly, ireo famantarana ireo dia natao hahantona amin'ny rindrina na hijoro malalaka. Ary aza adino ny mikaroka ny fipetrahan'ny talantalana, ny lamba famaohana lovia, ny fitoeran-jiro, ny jiro kofehy, sy ny maro hafa hamenoana ny bika aman'endrinao na hanomezana ho an'olona manokana!
Akora Acrylic / Stainless vy
Size sy endrika Volavola namboarina
Toetoetra Tsy tantera-drano, hery ambany, asa lava ary fametrahana mora, effets visuels tsara. Sns
Tselatra azo antoka DC 12V; (AZA MIFANDEHA AMIN'NY JERA 110V NA 220V AZY ATAO
Volavola sy fandrefesana Namboarina ekena, maro loko loko, endrika, habe misy
Fampiharana Na anaty trano na ivelany, haingon-trano sy dokam-barotra
Fonosana Nofonosina sarimihetsika miaro, avy eo amin'ny taratasy na boaty hazo
Safidy 1 tsara indrindra ho an'ny fampiasana ivelany, safidy maharitra maharitra
2 mety amin'ny fanaovana litera lehibe, litera 100-300cm
Fomban'ny 3 frontlit na ny style frontlit na backlit, ka ho famirapiratana avo hisarika olona
Mazava ny litera 4
Tava 1: acrylic matevina 2.6mm tahaka ny endriny, manodidina ny 2.5cm ny hateviny
Ny lafiny 2 dia akrilika, koa ny tarehy dia vy vy
3 miverina: acrylic backer
Fomba fametrahana 4: fametahana volo mba hametahana tendrombohitra, tombo-kase silika hifikirana
Fomban'ny style 5 frontlit, na ny frontlit no backlit
Ahoana ny fametrahana fambara Backlit
Ny litera sy logo famantarana Back Back antsika dia mora apetraka. Manoro hevitra izahay ny hanana mpahay herinaratra manana alalana na installer manamarina fa feno ny filanao herinaratra. (mahazatra 110 volt amin'izao fotoana izao mihazakazaka mankany amin'ireo mpanova voatanisa UL). Izahay dia manome izay ilaina rehetra amin'ny fametrahana mora.
Tena araka ny voalaza! Mendrika ny vola laniana sy fandefasana haingana be! Mitovy amin'ny sary ihany ary lehibe ny habeny, tsy lehibe sy tsy kely loatra! Tiako! Tena tsara ny fonosana, tonga teo amin'ny toerana tsy hiondraran'ilay famantarana izy ireo ka tsy nisy nanjo azy. Mety amin'ny mihantona amin'ny rindrina any ho any na koa mipetraka eo akaikin'ny zavatra iray ianao, saingy mila zavatra mitazona azy ianao raha mipetraka eo akaikin'ny zavatra iray ianao. Maivana be tsy mavesatra mihitsy, Masiaka ary mora ahantona.
Teo aloha: Sary boaty hazavana sarimihetsika translucent
Manaraka: Kalitao avo lenta ho an'ny sarimihetsika 3m Envision Tranlucent - Sarin'ny boaty hazavana translucent - Lima
famantarana famantarana vy vy
Taratasy hazavana sarimihetsika translucent
Sary boaty hazavana sarimihetsika translucent
Vinyl adhesive mandoko tena ho an'ny doka